Tag: garoonka | Sagal Radio Services
Dukaaman Qamriga lagu iibiyo oo kuyaala Garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho oo digniin loo diray.
Dukaaman Ganacsi oo kuyaala Gudaha Garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho ayaa la sheegay in lagu iibiyo Qamriga Nuucyadiisa kala duwan , waxaana halkaasi Qamriga ka iibsada dadka ajaaniibta ee jooga Caasimada iyo dadka kale ee iyana caba Qamriga.
Faah Faahin kasoo baxaya Weerar Qorsheesan oo saakay ka dhacay Magaalada Muqdisho
Faah faahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya weerar saakay kooxo hubeesan ay ku qaadeen gaari uu la socday Maareeyihii Guud ee Hay'adda Duulista iyo Saadaasha Hawada Garoonka diyaaradaha Magaalada Muqdisho Cali Maxamed Madoobe.
Ciidamadii gaarka ahaa ee la socday Madaxweynaha Puntland oo loo diiday inay galaan garoonka
Ciidamada AMISOM iyo Gudiga heerka qaran ee qaban qaabinaya aaska Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya ayaa u diiday inay galaan Ciidamada gaarka ah ee la socday Madaxweynaha Puntland C/wali Gaas gudaha garoonka diyaaradaha Aadan Cadde.
Sagal Radio Services • News Report • January 24, 2014
Madaafiic ay Al-shabaab sheegtay inay ku weerartay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho ayaa qaarood waxay dhaawac u geysteen dad rayid ah oo deggenaa xaafadda Buulo-xuubey ee degmada Wadajir.
Madaxa Shirkadda Maamusha Garoonka Diyaaradaha Muqdisho ee FAVORI oo sheegay in 50% uu kordhay dakhliga Garoonka
Sagal Radio Services • News Report • December 24, 2013
Madaxa shirkada maamusha garoonka diyaaradaha Muqdidho ee FAVORI LLC, Axmed Cetin ayaa sheegay inuu kordhay 50% (Boqolkiiba Konton) dakhliga kasoo xarooda garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee Muqdisho.